နီကိုးလ် Prause ၏ "Porn သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်" (2019) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်ကိုဝေဖန်မှု
အဆိုပါ 4-စာမျက်နှာနီကိုးလ် Prause ဝေဖန်နိုင်ပါတယ် ဤနေရာတွင်တွေ့ရှိရ။ ၎င်းသည်အောက်ဖော်ပြပါစာတမ်း (အထူးသဖြင့် Prause မဟာမိတ်များဖြစ်သော David Ley, Taylor Kohut နှင့် Sam Perry) ၏ဝေဖန်ချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Long-Term လိင်အရည်အသွေးပီသသူရဲ့ကွာခြားချက်က Short-Term အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းမူဘောင် (Leonhardt et al ။, 2018)။ ဤမှတ်ချက်ပေးသူများသည်ဂရုမစိုက်ပါ Leonhardt et alကြောင်းရဲ့အဓိကစာတမ်း "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအများအပြားပုံစံများကိုအဆိုးရေရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။"
မည်သို့ပင်ဆိုစေဘို့အများကြီးပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုလည်းမရှိ Leonhardt et al။ ရဲ့အခိုင်အမာ
ဆက်ဆံရေးအပေါ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှု? 70 ကျော်လေ့လာမှုများ (7 longitudinal လေ့လာမှုများအပါအဝင်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုကိုလျှော့ချဖို့ porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။
porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ? ဤစာရင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 35 လေ့လာမှုများပါရှိသည်။ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး6လေ့လာမှုများအကြံပြု causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
ပင်ကိုယ်မူလသုတေသန၏သဘောအရဆိုလျှင်တန်ပြန်ရန် Prause, Ley, Kohut နှင့်ပယ်ရီပစ္စုပ္ပန်ဘယျသို့ပွု? အာရုံ, ဆီလျှော်အငြင်းပွားမှုများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာစိစစ်မှတက်ကိုင်မထားတဲ့အနည်းငယ်ချယ်ရီ-ကောက်ယူဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်စာတမ်းများ။ လေးယောက်စလုံးစာရေးဆရာများတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုးကား, သူတို့ကြောင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေငြင်းခုန်တဲ့ညှိနှိုင်းလှုပ်ရှားမှုကိုမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများတွင်ဆက်ဆံရေးမျိုးပြဿနာတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှစ်ဦးစလုံး၏အမှန်တကယ်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထူးခြားတဲ့အခိုင်အမာဘို့မိမိတို့တစ်ဦးတည်းသောထောက်ခံမှုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ရှမွေလသည်ပယ်ရီတို့ကတိုက်ပိတ်စက္ကူ။ ဒါဟာသူ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုများသည်ဤအချက်မှာအယူအဆထက်အနည်းငယ်ပိုများမှာကိုဆိုလိုသည်သောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြိမ်နှုန်းအပေါ်တိကျသောဒေတာဆံ့မခံခဲ့ပါဘူး။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမဟုတ်ဘဲအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသည်တရားခံကြောင်း၎င်းတို့၏အခိုင်အမာထောက်ခံရန်ရန်မအစိုင်အခဲသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်လောက်ဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထား (အထကျကိုကြည့်ပါ) လည်းမရှိ။ ထိုမှတပါး, အဘယ်သူမျှမဆီးရောဂါပါရဂူသဘောတူ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ဤလိင်ပညာရှင်များနှင့်အတူ - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်“ ယေဘုယျကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေသည်ဟုထင်ရသည်” ဟုလည်းဆိုခြင်းဖြင့် Prause သည်ဝေဖန်ချက်ကိုယ်တိုင်တွင်သူမနှင့်ဆန့်ကျင်သည်
ထိုစာရေးသူအားမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည် နီကိုးလ် Prause ရှိပါတယ် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး နှင့်တစ် ဦး လုပ်။ ပြီးလျှင်, PIED debunking နှင့်အတူစွဲလမ်းနေသည် ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ဆန့်ကျင်3နှစ်စစ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လိင်မှုကိစ္စပြတ်တောက်မှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာကြသောလူငယ်များအားတစ်ပြိုင်တည်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အပြစ်တင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ။ ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 10, အတူတူ Gabe Deem & အဲလက်စ် Rhodes, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 11, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #12, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #13.
Prause ၏ထင်မြင်ချက်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပင်ကိုယ်မူလကောင်းမွန်စွာထောက်ခံထားသောအပျက်သဘောဆောင်သောဆိုးကျိုးများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မအောင်မြင်သည့်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Prause သည်မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆိုတွင် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လူအများစုအတွက်အကျိုးရှိသည်ဟူသောအတွေးကိုမြှင့်တင်သည်။ ညစ်ညမ်းသောကလေးများအတွက်အန္တရာယ်ကင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) အပြင်၊ Prause ၏ထင်မြင်ချက်သည် YBOP မှဝေဖန်ခဲ့သောအစောပိုင်း Prause အပိုင်းသုံးခုမှကူးယူထားသောအပိုင်းအစများနှင့်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။
နီးပါးတိုင်းပြောနေတာမှတ်နှင့် Prause, Kohut နှင့် Ley အစဉ်အဆက်ကိုးကားချယ်ရီ-ကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့, slate မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေနေတဲ့ 2018 အပိုင်းအစ၏ဤကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှုကိုတွေ့မြင်: "Debunkingအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are? "မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause အားဖြင့်.
ရန် Prause ရဲ့ 240-စကားလုံးအက္ခရာအတွက်တောင်းဆိုမှုများတစ်ဝေဖန်မှုများအတွက် ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ဒီကျယ်ပြန့်တုန့်ပြန်တွေ့မြင်: "၏ analysisဒေတာကိုစွဲလမ်းအဖြစ်လိင်ကိုထောကျပံ့ဘူး"(Prause et al။ , 2017).
YBOP ရှည်လျားပြီးကတည်းက Prause ရဲ့ 2016 "ဟုအဆိုပါအယ်ဒီတာမှပေးစာ" မှ၎င်း၏တုံ့ပြန်မှုအတွက်ချယ်ရီ-ကောက်ယူမကြာခဏဆီလျှော်, လေ့လာမှုများနှင့်မေးခွန်းထုတ်စရာတောင်းဆိုမှုများအများစုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းထားပါတယ်: အယ်ဒီတာမှပေးစာ: များ၏ဝေဖန်မှု "Prause et al ။ (2015) စွဲဟောကိန်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု " (2016)
ကျော် 70 လေ့လာရေး vs. နှစ်ဦးကို Highly သံသယရှိစာတမ်းများ
အထက်ပါဝေဖန်မှုများကိုပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးမည့်အစား၊ Prause ၏လက်ရှိဝေဖန်ချက်မှဥပမာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။ အဆုံး၌ Prause သည်လိင်မှုကိစ္စအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိဟုသူမ၏အခိုင်အမာ“ သက်သေပြရန်” သူမစုဆောင်းနိုင်သည့်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများအားလုံးကိုတင်ပြသည်။ လျစ်လျူရှုနေစဉ် Prause, နှစ်ခုသာသံသယကိုးကားပေးထားပါတယ် 70 သည်အခြားလေ့လာမှုများကျော် သူမ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ထိခိုက်စေသည်ဟု (8 longitudinal လေ့လာမှုများအပါအဝင်):
အဆိုပြုထားမော်ဒယ်၏အဓိကယူဆချက်တစ်ခု, preregistered, ကြီးမားတဲ့ပွားကြိုးပမ်းမှု VSS ဖို့တွေကပေါ်ကနေရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်အတွက်ဆင်းရဲတဲ့ကြားဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးမြင့် (ဆွဲဆောင်မှု, မေတ္တာ) မအထောက်အထားများကိုတွေ့ရှိရကြောင်းပေးထားနည်းနည်းအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည် (Balzarini၊ Dobson၊ ချင်း၊ & ကမ့်ဘဲလ်, 2017)။ တိုက်ရိုက်မေးတဲ့အခါဆက်ဆံရေးအတွက်စုံတွဲများအများဆုံးသူတို့ရဲ့ VSS ကြည့်ရှုသူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုမအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိပြီးအများအားဖြင့်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုကိုးကားကြောင်းယုံကြည် (Kohut, Fisher, & ကမ့်ဘဲလ်, 2016)။ ထို့ပြင်အခြားသူများသည် VSS ၏ဆက်ဆံရေးအားကျေနပ်မှုအပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှာဖွေရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည် (ရင်းနှီးမှုနည်းပါးနေသည့်အမျိုးသားများမှသွယ်ဝိုက်။ မှလွဲလျှင်; Veit, Štulhofer, & Hald, 2016) အဆိုပြုထားသောမော်ဒယ်၏ခန့်မှန်းချက်အတော်များများသည်ရှိပြီးသားဒေတာများမှအတုပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောပုံစံသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကွာဟမှုများ၏အခန်းကဏ္characterကိုဖော်ပြရန်ပိုမိုအသုံးဝင်သည်။
Prause ၏ထောက်ခံနှစ်ချက် (သော သူမအကြိမ်ကြိမ် tweets) ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေနှင့် Co-စာရေးဆရာတေလာ Kohut ၏ဓာတ်ခွဲခန်းမှလာကြ၏။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအဘယ်အရာဖြစ်သည်မဟုတ်။
ဆန်းစစ်ချက် #1: Kohut, Fisher, & ကမ့်ဘဲလ်, 2016 (အသေးစိတ်ကြည့်ရှုသည် ၏ဝေဖန်မှု "ဟုအဆိုပါလင်မယားဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏ခံစားသက်ရောက်မှု: ။ ကနဦးဖွင့်ပါ-အဆုံးသတ်၏တွေ့ရှိချက်, ပါဝင်သူ-အကြောင်းကြား, Bottom-Up ကိုသုတေသန"?) နှစ်ဦးမူလတန်းအတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကို (နည်းဗျူဟာ) ဒီလေ့လာမှုနေသောခေါင်းစဉ်:
1) လေ့လာကိုယ်စားလှယ်တစ်နမူနာဆံ့မခံခဲ့ပါဘူး။ အများဆုံးလေ့လာမှုများရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအလွန်သေးငယ်သောလူနည်းစုဒီလေ့လာမှုမှာ, porn ကိုအသုံးပြုပြသသွားရမည်အကြောင်း အမျိုးသမီး 95% မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ် porn ကိုအသုံးပြု။ နှင့် အမျိုးသမီး 83% (နှစ်ပေါင်းအချို့ကိစ္စများတွင်) အကြားဆက်ဆံရေး၏အစအဦးကတည်းက porn ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူများသည်နှုန်းထားများကောလိပ်-အသက်ယောက်ျားထက်ပိုမိုမြင့်မားများမှာ! တနည်းအားဖြင့်သုတေသီသူတို့ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်ရလဒ်ထုတ်လုပ်ရန်သူတို့ရဲ့နမူနာ skewed ရှိသည်ဟုပေါ်လာပါသည်။
အဖြစ်မှန်? မှဒေတာများ အကြီးဆုံး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကိုယ်စားလှယ် အမေရိကန်စစ်တမ်း (အထွေထွေလူမှုစစ်တမ်း) ထိုအစီရင်ခံတင်ပြ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးသာ 2.6% သည်လွန်ခဲ့သောလတွင်တစ်ဦး "ညစ်ညမ်း website မှာ" သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ 2000 ကနေဒေတာများ - 2004 (အသေးစိတ်မြင်ဘို့ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေး, 2014) ။ ဤအမှုနှုန်းအနိမ့်ပုံပေါ်စေခြင်းငှါနေစဉ်, အဲဒါကိုအများဆုံးအနေဖြင့်ညစ်ညမ်း-site ကိုအသုံးပြုမှုကို "တစ်လသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတစ်ချိန်က" ခဲ့လျှင်မေးလျှင် (1), အားလုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများကိုယ်စားပြု (2), သာအိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးကိုမေးမြန်း (3) ဆိုတာကိုသတိရ လေ့လာမှုများ "အစဉ်အဆက်သွားရောက်ခဲ့ပြီး" သို့မဟုတ်မေးဖို့ "နောက်ဆုံးနှစ်တွင်သွားရောက်ခဲ့သည်။ "
2) လေ့လာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုအကဲဖြတ်မဆို variable ကိုနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမပတျသကျဘူး။ အဲဒီအစား, မေးခွန်းများကို "နောက်ဆုံးသူ့ကိုဖွင့်လှစ်" အလုပ်လေ့လာမှု အဆိုပါဘာသာရပ်များ porn အကြောင်းကိုအပေါ် ramble နိုင်ရှိရာ။ (ဒါဟာမဟုတ်ဘဲအရေအတွက်ထက်အရည်အသွေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ) ထိုအခါသုတေသီများဆိုတဲ့အချက်ကိုအပြီးအဘယ်အဖြေကို "အရေးကြီးသော" တို့ဘယ်လို (လည်?) သူတို့စက္ကူအတွက်တင်ပြခြင်းငှါ, ramblings ဖတ်ပါနှင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါသုတေသီများရဲရငျ့စှာပိုပြီးထူထောင်, သိပ္ပံနည်းကျနည်းစနစ်များနှင့်ညစ်ညမ်းရဲ့ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုရိုးရှင်းတဲ့မေးခွန်းများကိုအလုပ်ပေးသောညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ်အခြားလေ့လာမှုများအပေါငျးတို့သ, ခဲ့ကြကြောင်းအကြံပြု ချို့ယွင်းချက်။ ဒီကယ့်ကိုသိပ္ပံလား? ဦးဆောင်ရေးသားသူ Kohut ရဲ့ က်ဘ်ဆိုက် နှင့်သူ၏ ရန်ပုံငွေရှာမှာကြိုးပမ်းမှု မအဖြစ်အနည်းငယ်မေးခွန်းများကိုမြှင့် သူက porn ကိုအသုံးပြု။ သာ။ ကြီးမြတ်သာတူညီမျှမှုနှင့်လျော့နည်း sexism နှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းပြောဆိုထားသည်ရှိရာသည်သူ၏ 2016 လေ့လာမှု အားဖြင့်တု (ကတွေ့ရှိချက် အစဉ်အဆက်ထုတ်ဝေနီးပါးသည်အခြားသက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှု).
ဆန်းစစ်ချက် #2: Balzarini, Dobson, ချင်း၊ & ကမ့်ဘဲလ်, 2017 (အသေးစိတ်ကြည့်ရှုသည် erotica ထိတွေ့ယောက်ျားအတွက်ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များအတွက်ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းလျှော့ချပါသလား? Kenrick, Gutierres နှင့် Goldberg ၏လွတ်လပ်သောပွား.)
ဤသည် 2017 လေ့လာမှုတစ်ဦးပုံတူပွားရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် 1989 လေ့လာချက်, ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ဆက်ဆံရေးအတွက်ယောက်ျားမိန်းမတို့ထိတွေ့ရာ။ အဆိုပါ 1989 လေ့လာမှုလူတို့သညျဝတ်လစ်စလစ်ထိတွေ့ခဲ့ကြသူကိုတွေ့ Playboy centerfolds လျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက် rated နှင့်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်များအတွက်လျော့နည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာကဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ 2017 ကွိုးစားအားထု 1989 တွေ့ရှိချက်ပုံတူပွားရန်ပျက်ကွက်သည်အတိုင်း, စာရေးဆရာများအဆိုပါ 1989 လေ့လာမှုမှားတယ်အခိုင်အမာနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒလျော့လို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအပတ်ဝန်းကျင်ရိုးရှင်းစွာပိုပြီး pornified နှင့်အမာခံဖြစ်လာပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်ဖွယ်ရှိပွား "ပျက်ကွက်" ။ အဆိုပါ 2017 သုတေသီများကျောင်းမှာအပြီး MTV ကိုကြည့်ကြီးပြင်းတဲ့သူ 1989 ကောလိပ်ကျောင်းသားများကစုဆောင်းခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစားသူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်များဂိုဏ်းပေါက်ကွဲသံကြီး orgy ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများအဘို့အ PornHub surfing ကြီးပြင်းလာတယ်။
အများအပြားကောလိပ်ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးက X-rated ဗီဒီယိုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပုံကို 1989 ခုနှစ်တွင်? သိပ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်နှစ်ယောက် 1989 ကောလိပ်ကျောင်းသားများကတဦးတည်း session တစ်ခုအတွက်မျိုးစုံအမာခံကလစ်ပ်မှ masturbating ပေါ်တွင်အပျိုဖော်ဝင်စကနေ, တိုင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ session ကိုသုံးစွဲ? အဘယ်သူမျှမ။ အဆိုပါ 2017 ရလဒ်များကိုများအတွက်အကြောင်းပြချက်ထင်ရှား: တစ်တစ်နေဆဲပုံရိပ်မှအကျဉ်းထိတွေ့မှု Playboy centerfold 2017 အတွက်ကောလိပ်ကျောင်းယောက်ျားနှစ်ပေါင်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသောအရာကိုနှိုင်းယှဉ်ကြီးမားတဲ့ဟနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပင် စာရေးသူ ၎င်းတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးအသိပေးချက်နှင့်အတူမျိုးဆက်ကွဲပြားခြားနားမှုဝန်ခံခဲ့သည် - ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့နိဂုံးချုပ်သို့မဟုတ်သတင်းစာများအတွက်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်မပြောင်းလဲခဲ့
ပထမဦးစွာပြုလုပ်မူရင်းလေ့လာမှု 1989 အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ကြောင်းထောက်ပြရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့သော်လည်း, ယနေ့အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါပြီမပြုစေခြင်းငှါ, ဝတ်လစ်စလစ်ပုံရိပ်တွေထိတွေ့အတော်လေးပိုပြီးနေရာအနှံ့ဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်တစ်ဦးဝတ်လစ်စလစ် centerfold ထိတွေ့ခံရခြင်းမူလကအစီရင်ခံသည်အဆိုပါဆနျ့ကငျြဘအကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိပွားလေ့လာမှုများများအတွက်ရလဒ်များကိုယခုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မူရင်းထိတွေ့မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်လေ့လာမှု, access ကိုနှင့် erotica ပင်လက်ခံမှုကှာခွားနိုငျသညျ။
ဘက်မလိုက်စကားပြေတစ်ရှားပါးဥပမာအားဖြင့်ပင်ဒါဝိဒ်သည် Ley အတွက် မဖြစ်မနေခံစားခဲ့ရ အဆိုပါသိသာထောက်ပြ:
ယဉ်ကျေးမှု၊ အမျိုးသားနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုသည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှစ၍ သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသောယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသို့မဟုတ်အဝတ်အချည်းစည်းရှိသောမိန်းမများကိုမတွေ့ရတော့ခြင်းဖြစ်သည်။ Thrones ၏ဂိမ်း ကြော်ငြာများကိုရေမွှေးပေးရန်၊ ပြည်နယ်တော်တော်များများ၌အမျိုးသမီးများသည် topless သွားခွင့်ရသည်။ ဒါကြောင့်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုမှာအမျိုးသားတွေဟာသူတို့ညစ်ညမ်းမှုနဲ့လိင်မှုကိစ္စကိုညစ်ညမ်းမှုနဲ့နေ့စဉ်သတင်းမီဒီယာတွေမှာပေါင်းစပ်ဖို့သင်ယူခဲ့ကြတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုသို့မဟုတ်သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုမချစ်ခဲ့ဘူး။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သောအမျိုးသားများသည်လိင်၊
ဒီစမ်းသပ်မှုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမဆိုလိုပါကိုသတိပြုပါ မရှိတယ် သူတို့ရဲ့ချစ်သူများအဘို့ယောက်ျားရဲ့ဆွဲဆောင်မှုထိခိုက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ "centerfolds" မှာရှာဖွေနေဒီရက်မျှချက်ချင်းသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ အတော်များများကယောက်ျားအစွန်းရောက်သတင်းပို့ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းတက်ပေးခြင်းပြီးနောက်မိတ်ဖက်ဖို့ဆွဲဆောင်မှုအတွက်တိုး။ နှင့်အညီ, သင်တန်း၏, ထို longitudinal peer-ပြန်လည်သုံးသပ်သက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ် ဒီနေရာမှာကိုးကား ဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ deleterious သက်ရောက်မှုဆန္ဒပြနေသော။
ရိုးရှင်းစွာ ထား. , Prause မအောင်မြင်ကွာရှင်းဖို့ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများ, ပြိုကွဲခြင်း, ဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု၏သဘောအရဆိုလျှင်တန်ပြန်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကသူမကိုးကားဒုတိယအခွင့်အာဏာများစာရေးဆရာများအနောက်တိုင်းအွန်တက္ကသိုလ်မှတေလာ Kohut ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်သားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဝီလျံ Fisher ကဦးဆောင်သောသုတေသီများ၏ဤအုပ်စုတစ်စု, တစ်သမတ်တည်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာများပြားလှအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များ (စွန်အဖျားလေ့လာမှုများ) ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဆက်သွယ်ထားသောကျယ်ပြန့်စာပေတန်ပြန်ရန်ပေါ်လာကြောင်းရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာလေ့လာမှုများ, ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, Kohut နှင့် Fisher နှစ်ဦးစလုံးလုပ်ကြံအတွက်အဓိက, ကမေးခွန်းထုတ်စရာအခန်းကဏ္ဍကစား ကနေဒါ motion 47.
Prause Porn ကလေးများသည်ရုံ Fine ဖြစ်နိုင်ပါစေ Says
သူမကဒီနယ်ပယ်ထဲမှာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးလျှင်အဖြစ်မဆိုယခင် Prause စာတမ်းများနှင့်မတူဘဲ Prause ကဒီမှာကလေးများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသို့ delves ။ (သူမလက်ရှိကယ်လီဖိုးနီးယားစိတ်ပညာလိုင်စင်ရရှိထားသူသော်လည်း, Prause ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. စက္ကူထုတ်ဝေဘယ်တော့မှထားပါတယ်, သူလူနာပြုမူဆက်ဆံပါဘူး။ )
တစ်ခါတစ်ရံသူမကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်; အခြားအချိန်များတွင်ဤဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ကိုရေးသားသူများကဲ့သို့ဖတ်ရသည် အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ Prause ၏“ လူငယ်အပျော်စီးမှုအတွက်အပျော်အပါး” အပိုင်းမှနမူနာအချို့သည်စာဖတ်သူများကိုအဝေးမှရှောင်ရှားခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများအကြားအနုပညာဆန်ဆန်သွားသည်၊
စပ်စု, Leonhardt et al ။ VSS ၏သက်ရောက်မှုသည်ကလေးများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေပြီးမိသားစုလျော့ပါးစေရန်လိုအပ်သည် (“ [မိသားစု] သည်လိင်မီဒီယာ၏သြဇာကိုလျော့ချနိုင်သည်၊ ”“ မူလအရင်းအမြစ်ဆက်သွယ်မှုအတွင်းတွင်ကောင်းမွန်သောရှာဖွေရေး”) ။ လက်တွေ့အားဖြင့် VSS နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါသည့်ကလေးငယ်မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမိဘ၏တုန့်ပြန်မှုသည်အရှက်တကွဲဖြစ်စေနိုင်ပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည် (Gagnon, 1985) …။
အလားတူပင် Leonhardt et al ။ (2018) လူငယ်များသည်သူတို့က“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအက္ခရာများနှင့်ထိတွေ့” ပြီး“ ကလေးများသည်သူတို့၏ပုံသဏ္exposureာန်ထိတွေ့မှုကိုခံရသည်” ဟုဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်လူငယ်များသည်တက်ကြွသောလိင်မှုကိစ္စများ၊ အပျော်အပါးအတွက်လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုလျစ်လျူရှုထားသည်။
Leonhardt et al ။ (၂၀၁၈) သည်“ ထိတွေ့မှု၏သက်တမ်း” ကိုအနှုတ်လက္ခဏာရလဒ်များအတွက် (“ ပုံစံ” ကဏ္ in) တွင်အန္တရာယ်အချက်တစ်ခုအဖြစ်တင်ပြသည်။ သို့တိုင်အစောပိုင်း VSS အားကြည့်ရှုခြင်းတွင်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးများရှိသည်……
VSS ကိုတွေ့ရှိခဲ့သောလူငယ်များအနေဖြင့် VSS ကြည့်ရှုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအထောက်အကူပြုရန်နည်းလမ်းများဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချခြင်း (Livingstone & Helsper, 2009) သည် Leonhardt et al မှတင်ပြသော VSS အတွေ့အကြုံအားဆက်စပ်ရန်အငြင်းပွားမှုများနှင့် ပို၍ ကိုက်ညီပုံရသည်။ (၂၀၁၈) … ..
Prause ၏“ လူငယ်များအတွက်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” အပိုင်းသည်အတော်အတန်ရှည်လျားသော်လည်း၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကလေးသူငယ်များအတွက်ကြီးမားသောကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းသူ၏ရပ်တည်ချက်ကိုထောက်ခံရန်ချယ်ရီရွေးချယ်ထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလေ့လာမှုလေးခုကိုသာကိုးကားထားသည်။ လေ့လာမှုလေးခုအနက်သုံးခုမှာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူများနှင့် ၁။ လိင်အင်္ဂါကြည့်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိခြင်း၊
Prause အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံပန်းချီထားတဲ့ဆယ်ကျော်သက် / အင်တာနက်ညစ်ညမ်းလေ့လာမှုများ၏သဘောအရဆိုလျှင် omits ။ ၏ဤစာရင်းကိုကြည့်ရှုပါ 250 ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလေ့လာမှုများကျော်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်အတိုင်း, ဆယ်ကျော်သက်လေ့လာမှုများနုပျို porn အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောများပြားလှအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များသတင်းပို့ပါ။ ဥပမာ, စာပေ၏ဤသုံးသပ်ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား (မှတ်ချက်: အဘယ်သူအားမျှသူမ၏အနေအထားနှင့်အတူ align ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Prause စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုးကားသို့မဟုတ် Meta-လေ့လာဆန်းစစ်မထားဘူး။ ): ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2012)။ နိဂုံးမှ:
မြီးကောင်ပေါက်များကအင်တာနက်ကိုတိုးမြှင့်ရရှိမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး, သင်ကြားရေးနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတို့အတွက်မကြုံစဖူးအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးထားသည်။ ပြောင်းပြန်စာပေများတွင်ထင်ရှားကြောင်းအန္တရာယ်များ၏အန္တရာယ်သည်ဤဆက်ဆံရေး elucidate ဖို့အားထုတ်မှုရှိအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှဆယ်ကျော်သက်ထိတွေ့မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သုတေသီများဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ စုပေါင်းဤလေ့လာမှုများညစ်ညမ်းလောင်တဲ့သူလူငယ်လက်တွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးများနှင့်ယုံကြည်ချက်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တွေ့ရှိချက်များထဲတွင်အလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ၏အဆင့်မြင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်, အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ညစ်ညမ်းပိုပြီးမကြာခဏစားသုံးမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းပြီ ... ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်လိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ၏တိုးချဲ့ဒီဂရီနှင့်အတူအကြမ်းဖက်မှုကိုသရုပ်ဖော်ကြောင်းညစ်ညမ်း၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ အဆိုပါစာပေညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် Self-အယူအဆ၏မြီးကောင်ပေါက် '' အသုံးပြုမှုအကြားအချို့ဆက်စပ်မှုညွှန်ပြပါဘူး။ ယောက်ျားလေးများသူတို့အဖြစ် virile သို့မဟုတ်ဤမီဒီယာအတွက်ယောက်ျားအဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါကိုကွောကျရှံ့နေချိန်တွင်မိန်းကလေးများ, သူတို့ကညစ်ညမ်းပစ္စည်းအတွက်ရှုမြင်မိန်းမများမှကိုယ်ထိလက်ရောက်ယုတ်ညံ့ခံစားသတင်းပို့ပါ။ မြီးကောင်ပေါက်လည်းညစ်ညမ်း၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုသည်၎င်းတို့၏ Self-ယုံကြည်မှုနှင့်လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာတိုးအဖြစ်လျော့နည်းသွားကြောင်းသတင်းပို့သည်။ ထို့အပြင်သုတေသန, အင်တာနက်ပေါ်ရှိတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအမြီးကောင်ပေါက်, လူမှုရေးပေါင်းစည်းမှု၏အနိမ့်ဒီဂရီရှိသည်အကြံပြုအကငျြ့ပြဿနာများ, ဆိုးသွမ်းအပြုအမူများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်, စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေမြင့်မားဖြစ်ပွားမှုများတွင်တိုးနှင့်စောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Bond လျော့နည်းသွားသည်။
Prause ၏ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသောအထောက်အပံ့ပစ္စည်းများနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ထို့အပြင်ဤစာပေ၏ဤမကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ပစ္စည်းစားသုံးမှုနှင့်အရွယ်မရောက်သေးသူ '' ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှု: နောက်ဆုံးပေါ်အထောက်အထားစာပေကနေ (2019) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ရလဒ်: ကိုရွေးချယ်လေ့လာမှုများ (ဎ = 19), အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အများအပြားအမူအကျင့်, psychophysical နှင့်လူမှုရေးရလဒ်များကို၏စားသုံးမှုအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့အဆိုအရ - အစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်, မျိုးစုံနှင့် / သို့မဟုတ်ရံဖန်ရံခါမိတ်ဖက်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံ, အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုအတုခိုးပြီးပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ကျားမအခန်းကဏ္ဍ assimilating , အလုပ်မဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်အမြင်, မှထုတ်ပြန်သော, စိုးရိမ်ပူပန်သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ, compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု - အတည်ပြုခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံး - အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ၏အရွယ်မရောက်သေးသူများ၏ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤပြissueနာကိုလျစ်လျူရှု။ မရနိုင်တော့သည့်အပြင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများမှပစ်မှတ်ထားရမည်။
လေ့လာမှု ၁၃၅ ခုကိုစစ်ဆေးသည့် ၂၀၁၆ meta-analysis သည် 2016 ခုနှစ်ဖြစ်ပါသည် မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015။ ကောက်နုတ်ချက်:
ဤအရေးကြီးသော meta-လေ့လာမှုများကို Prause ကပျက်ကွက်ခြင်းသည်သူမ၏ဆန့်ကျင်သောပြောဆိုချက်များကိုဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျပြုလုပ်ထားခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများပေါ်ပေါက်စေသည်။ မျက်နှာမလိုက်ခြင်းသည်ပညာရပ်ဆိုင်ရာစာပေများ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သောကြောင့်အောက်ပါစာမျက်နှာကိုသုံးသပ်ပါ - နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း